Themba Ubulumko BukaThixo Ubomi Bakho Bonke | Isigidimi SeBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI INtetho Yezandla YaseMadagascar ISepedi ISpanish Intetho Yezandla YaseCuba Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla YaseVenezuela Intetho Yezandla yase-Ecuador Intetho Yezandla yase-Estonia Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseCzech Intetho Yezandla yaseDatshi Intetho Yezandla yaseFinland Intetho Yezandla yaseGrisi Intetho Yezandla yaseIndonesia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseKorea Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yaseNicaragua Intetho Yezandla yaseOstreliya Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yasePoland Intetho Yezandla yasePortugal Intetho Yezandla yaseQuebec Intetho Yezandla yaseRashiya Intetho Yezandla yaseSpain Intetho Yezandla yaseTshayina Intetho Yezandla yaseZimbabwe Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Irish Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiAssamese IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBashkir IsiBassa (saseCameroon) IsiBatak (SaseToba) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBoulou IsiBulgarian IsiCambodia IsiCebuano IsiChichewa IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChol IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiDigor IsiDouala IsiEfik IsiEstonia IsiFaroese IsiFinnish IsiFrentshi IsiFulfulde (saseCameroon) IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHmong (White) IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKabyle IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKazakh IsiKekchi IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKonkani (saseRoman) IsiKonkani (sesiDevanagari) IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Sorani IsiKwanyama IsiLaotia IsiLatvia IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMam IsiMapudungun IsiMaya IsiMazahua IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMiskito IsiMixtec (saseHuajuapan) IsiMizo IsiMongolia IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNavajo IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNias IsiNorway IsiOssetia IsiOtomi (SaseMezquital Valley) IsiPangasina IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseCuzco) IsiQuiche IsiRashiya IsiRomania IsiRomany (SaseSouthern Greece) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSomali IsiSranantongo IsiSwahili IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTamil IsiTarahumara (SaseMbindini) IsiTarascan IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUdmurt IsiUkrainian IsiUrdu IsiUrhobo IsiUzbek IsiUzbek (NgesiRoman) IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiXhosa IsiYoruba IsiZapotec (saseLachiguiri) IsiZulu isiLow German isiZapotec (saseIsthmus)
Ukukhokelwa Bubulumko BukaThixo
Incwadi yeMizekeliso yingqokelela yamazwi esiluleko aphefumlelweyo, inkoliso yawo ebhalwe nguSolomon, nasikhokelayo kubomi bemihla ngemihla
NGABA uYehova nguMlawuli onobulumko? Enye indlela esinokuyifumana ngayo impendulo echanileyo kulo mbuzo, kukuqwalasela isiluleko sakhe. Ngaba siyasebenza? Ngaba ukusisebenzisa kuyabuphucula ubomi buze bube nentsingiselo ngakumbi? UKumkani uSolomon osisilumko wabhala intlaninge yemizekeliso. Le mizekeliso isebenza phantse kuzo zonke iinkalo zobomi bethu. Nantsi eminye yayo.
Simele sikholose ngoThixo. Ukuze sibe nolwalamano oluhle noYehova kubalulekile ukuba sikholose ngaye. USolomon wabhala: “Kholosa ngoYehova ngayo yonke intliziyo yakho, ungayami ngokwakho ukuqonda. Uze umgqale yena ezindleleni zakho zonke, kwaye uya kuwenza uthi tye umendo wakho.” (IMizekeliso 3:5, 6) Ukukholosa ngoThixo ngokufuna ulwalathiso lwakhe size simthobele, kwenza ubomi bethu bube nenjongo. Xa sisenjenjalo siyamvuyisa uYehova yaye simenza akwazi ukuphendula kwimbambano eyaphakanyiswa lutshaba lwakhe uSathana.—IMizekeliso 27:11.
Ukusebenzisana nabanye ngobulumko. Indlela uThixo awaluleka ngayo amadoda, abafazi nabantwana isebenza ngakumbi kweli xesha lethu kunangaphambili. Eyalela indoda ukuba ihlale ithembekile kumfazi wayo, uThixo uthi: ‘Yiba nemihlali ngumfazi wobutsha bakho.’ (IMizekeliso 5:18-20) Kwincwadi yeMizekeliso abafazi abatshatileyo bafumana umzekelo womfazi ofanelekileyo othandwayo yindoda nabantwana bakhe. (IMizekeliso, isahluko 31) Nabantwana bayalelwa ukuba bathobele abazali babo. (IMizekeliso 6:20) Le ncwadi ibonisa nokubaluleka kokuba nabahlobo, kuba ukuba yinkomo edla yodwa kwenza abantu bazingce. (IMizekeliso 18:1) Abahlobo banokusiphembelela ekwenzeni okulungileyo okanye okubi, ngoko kufuneka sibakhethe ngobulumko.—IMizekeliso 13:20; 17:17.
Zinyamekele ngobulumko. Incwadi yeMizekeliso inesiluleko esixabisekileyo ngendlela esinokukuphepha ngayo ukusebenzisa kakubi utywala, esinokukwazi ngayo ukulawula iimvakalelo zethu ngoxa sikhuthele emsebenzini. (IMizekeliso 6:6; 14:30; 20:1) Ilumkisa ngelithi ukukholosa ngezinto ezithethwa ngabantu kunesiluleko sikaThixo kukhokelela kwintlekele. (IMizekeliso 14:12) Isibongoza ukuba sikhusele umntu wangaphakathi, intliziyo, kwiimpembelelo ezonakalisayo, kwanokuba singalibali ukuba “iphuma [kwintliziyo] imithombo yobomi.”—IMizekeliso 4:23.
Izigidi zabantu ezisehlabathini zifumanise ukuba ukuphila ngesiluleko esinjalo kuyabuphucula ubomi bazo. Ngenxa yoko, zinezizathu ezininzi zokuthobela uYehova njengoMlawuli.
—Oku kusekelwe kwincwadi yeMizekeliso.
Sinokufunda ntoni kwincwadi yeMizekeliso?
Sisiphi isikhokelo esikwiMizekeliso esiphathelele ukukholosa ngoThixo, ukusebenzisana ngobulumko nabanye nokuzinyamekela?
Bunokufunyanwa phi ubomi obanelisayo nobunentsingiselo? USolomon waba nelungelo elikhethekileyo lokufumana impendulo yalo mbuzo. Ekubeni wayesisityebi, enobulumko negunya, wakwazi ukufumanisa enoba ezi zinto zazinokumzisela ulwaneliseko kusini na. Wasukelana nezinto eziphathekayo, watshata iimbelukazi ezininzi, waza wazonwabisa ngendlela ebalaseleyo. Wakha izakhiwo ezikhulu. Wafunda iincwadi ezininzi. Yintoni awayifumanayo? “Yonk’ into ingamampunge.” Ngenxa yoko, wafikelela kwesi sigqibo: “Ukuqosheliswa kombandela, emva kokuba yonk’ into iviwe, naku: Yoyika uThixo oyinyaniso uze ugcine imiyalelo yakhe. Kuba oku kuyimbopheleleko yomntu.”—INtshumayeli 12:8, 13.
Ngaba “Ubulumko Obuvela Phezulu” Buyasebenza Ebomini Bakho?
IBhayibhile ineengongoma ezine ezisinceda sibe nobulumko.